ffmpeg inokutendera kuti utore zvinoitika pane yako Linux skrini. | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Desks, Resources
ffmpeg muunganidzwa wemahara software utilities ayo angangoita munhu wese anenge atoziva kare. Iyo yazvino vhezheni yakagadzika yave 1.1, uye inogona kurekodha, kushandura, kutenderera odhiyo uye vhidhiyo, iine Codecs, nezvimwe. Iyo pakutanga yakagadzirirwa Linux, kunyangwe ichigona kushandiswa pane mamwe masisitimu. Iye zvino unogona kunyora desktop yako uchishandisa irori uye woratidza shamwari dzako zvinhu zvinoitika kana kuishandisa kurekodha zvidzidzo zvevhidhiyo.
Imwe nguva yapfuura ndakatsvaga maturusi kunyora chii chakaitika pakombuta yangu kugadzira Linux vhidhiyo tutorials, mushure mekutsvaga zvakanyanya uye kuyedza, maturusi andakawana haana kundibvumidza kuvhura kwanguSuSE (ini ndakazopedzisira ndagara nerekhodimydesktop), pachinzvimbo cheUbuntu ndakawana xvidcap.
Zvakanaka ipapo, ini ndichatsanangura chimwe chinhu kuitira kuti ivo havafanirwe kutsvaga zvakanyanya kana zvikaitika kwavari seni uye ivo havana kugutsikana kwazvo nezvirongwa zviripo zviripo. Izvo ndezve maitiro ekuzviita nekutenda kune ffmpeg uye PulseAudioVolume Kudzora. Kana iwe uine aya maviri mapakeji akaisirwa (ffmpeg uye pavucontrol), chinhu chekutanga kuvhura PulseAudio Vhoriyamu Kudzora uye enda kune "Kurekodha" skrini, ipapo isu tichasarudza sarudzo "Monitor ye Yakavakirwa-mukati Audio AnalogStereo" yekurekodha. Ipapo, kugadzirisa mashandiro uye nekuzviita nenzira yakapusa, isu tinongofanirwa kumhanyisa script tichishandisa mumwe wemirairo inotevera (iri mune dhairekitori imwechete iko iko iko):
sh desktop rekodhi
sosi desktop desktop
Asi kutanga isu tinofanirwa kugadzira iyo script kuitira kuti iitwe. Kuti tiite izvi, isu tinovhura chinyorwa chemavara pamwe nemupepeti watinoda uye isu tinodaidza iyo faira "desktoprecording.sh" isina makotesheni uye mukati tinonyora:
ZITA = "myivideo.avi"
kana [$ STR]; ipapo
ZITA = "$ @"
echo "Kana iwe ukasadoma zita reiyo vhidhiyo faira, myivideo.avi ichashandiswa"
#NAME = "$ (echo $ NAME | sed 's / \_ / \_\_ / g')";
echo "Kuchengeta mu $ NAME ...";
ffmpeg –f alsa –i default –f x11grab –s ZZZZxxYYYY -r RR –i: 0.0 –sameq “$ NAME”
Ukatarisa mutsetse wekupedzisira we chinyorwaTiine x11grab paramende tinogona kurekodha nzvimbo yakaratidzirwa mushure me - (unofanira kutsiva ZZZZxxYYY nesarudzo kana saizi yenzvimbo yaunoda kunyora, semuenzaniso 800 × 640). Iyo-- r Sarudzo inotibvumidza isu kuti tigoisa maframu evhidhiyo kuti inyorwe (RR inofanira kutsiviwa neicho chinhu, semuenzaniso 30). Uye voila, mushure mekuchengetedza iyo script unogona kutanga kuishandisa.
Mamwe mashoko - VP9 iyo nyowani yekumanikidza fomati yeGoogle vhidhiyo
Kunobva - xpressrazor
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » ffmpeg: nyora yako Linux desktop pasina matambudziko
Mhoroi, kana uchiteedzera kubva kumashoko emazwi imwe uye zvakapetwa makotesheni anorasikirwa nemhando yavo chaiyo uye haishande, unogona kuinyora mukodhi fomati kana kuiisa kumwe kunhu sefaira? Ndatenda
Ndatenda. Mukugadzirisa, semuenzaniso 1280X800, iyo X inofanirwa kuverengerwa mutemo wekushanda.